Torolàlana momba ny Ursoc - Emerald Nightmare Raid - Heroic | Tarika, nofy ratsy Emeraody | WoW Guides | WoW Guides
Torolàlana momba ny Ursoc - Emerald Nightmare Raid - Heroic
Ana Martin | | Bands, Emerald Nightmare
Tongasoa eto amin'ny torolàlana amin'ny ady amin'ny Ursoc, fihaonana fahefatra an'ny andian-jiolahy Emerald Nightmare. Amin'ity torolàlana ity dia ho hitantsika ireo fahaiza-manao izay tsy maintsy hatrehintsika sy ny paikady tsotra indrindra handresena an'i Ursoc amin'ny maody mahery fo. Mazava ho azy fa manan-kery ho an'ny fahasahiranana ambany kokoa ity torolàlana ity.
1 Lore an'ny fihaonana
5 Soso-kevitra amin'ny asany
Lore an'ny fihaonana
Ursoc dia iray amin'ireo andriamanitra bibidia. Mpiaro ny volom-bolo ary mifamatotra akaiky amin'ny herin'ny famolavolana endrika, ny bera lehibe dia mpiaro an'i Azeroth. Saingy rehefa niditra tao amin'ny torimasony tao amin'ny fitoerany Grizzly Hills i Ursoc, dia niroboka kolikoly ny tontolo nanodidina azy. Rehefa nifoha izy dia nandevona sy nanolana ny tenany ny fijaliana sy ny nofy ratsy.
Ursoc dia mihazakazaka mamely ny fahavalony amin'ny [Overwhelming Impact], mierona tsindraindray hamoaka [Roaring Cacophony].
manafotra: Ny ursoc dia manaloka ny fiarovan'ny mpilalao ho an'ny 1.404.141. fahasimbana ara-batana. Mampitombo ny fahasimbana ara-batana nalain'ny 15% ary mampitombo ny fahasimbana nalaina avy tany Dismember tamin'ny 150% nandritra ny 12 seg. Mikatona ity vokany ity.
tao an-tanàna: Nihombo tamim-pahavitrihana mpilalao i Ursoc, ka nahatonga isa 1.253.698. fahasimbana ara-batana ary 733.645 p. fahavoazana ara-batana fanampiny isaky ny 2 seg mandritra ny 12 seg.
Fibanjinana mifantoka: Ursoc dia mampifantoka ny masony amin'ny mpilalao iray, miampanga azy ireo aorian'ny 6 sec ary mamely azy ireo amin'i Crushing Slam. Rehefa tonga tany amin'ny toerana nalehany i Ursoc dia namely ny mpilalao rehetra tamin'ny Overwhelming Impact.
Inertia: Ursoc dia manindrona ny mpilalao rehetra amin'ny làlan'ny tanjony, ka miteraka fahavoazana 448.855. Ny fahasimbana ara-batana amin'ny lasibatra rehetra amin'ny lalany ary mandondona azy ireo indray. Ireo mpilalao ireo dia mandray fahasimbana mitombo 500% avy any Inertia mandritra ny 50 seg.
Fiantraikany tafahoatra: Rehefa mahatratra ny tanjona kendreny i Ursoc dia mamely 2.042.274. fahasimbana ara-batana ho an'ny mpilalao rehetra. Io vokany io dia mihena amin'ny mpilalao rehetra ampitan'i Ursoc.
Famonoana tototra: Ny ursoc dia mamely 1.547.775. fahasimban'ny vatana kendrena. Mihena ny fahasimbana raha vao avy any Ursoc no kendrena.
Cacophony mierona: Mamoaka feo midradradradra mafy, izay miteraka 4.023.949. Ny fahasimbana ara-batana dia mizara roa amin'ireo mpilalao rehetra ao anatin'ny 25 metatra.
Cacophony amin'ny fampijaliana: Isaky ny mierona i Ursoc dia mamela ny sarin'ny nofy ratsy izy. Ao amin'ny fidradradradrana manaraka an'i Ursoc, ny sary Nightmare dia mamoaka feon-mahery mahery vaika koa 412.740 p. Ny fahasimban'ny aloka dia mizara roa amin'ny mpilalao rehetra ao anatiny 20 m. Io vokany io dia mitsoaka amin'ny horohoro ny mpilalao 3 seg.
Miasma: Ny sarin'ny Nightmare dia mandefa faritra miasma iray miaraka amin'ny radius 20 metatra manodidina azy, ary niteraka fahasimbana 105.600. Manimba ny aloka isaky ny 1 seg ireo mpilalao voafandrika ao anatiny.
Fifandirana mafy: Mampitombo ny fahavoazana natrehin'i Roaring Cacophony hatramin'ny 10% ny akony. Mikatona ity vokany ity.
Raikitra ny rà: Ursoc dia miditra amin'ny fanjakana Mighty Rage miaraka amin'ny fahasalamana 30% tavela, mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny 20% ary ny fahavoazana 25%.
Ny lalao manoloana ny Ursoc dia lalao somary tsotra ihany, fa ny iray kosa hametraka ny fitsapana ho an'ny vondrona misy anay; inona no atao hoe a "Gear Check".
Alohan'ny hanombohana ny lalao dia hanendry vondrona mpilalao roa izahay izay hiandraikitra ny fanakanana ny entan'i Ursoc. Amin'ny tranga misy antsika dia avelantsika ho vonona ny vondrona roa misy mpilalao 5, satria ampy izy ireo hizara ny fahasimban'ity fahaiza-manao ity ary azonay fa ny isan'ny mpilalao farafahakeliny dia tsy maintsy mihetsika.
Tokony hotadidintsika fa ny mpilalao manakana fiampangana dia handresy ny debuff an'ny Inertia, izay milaza fa tsy ho azon'izy ireo sakanana ny fiampangana roa nifanesy; Noho io antony io dia hifanakalo izahay, ny vondrona voalohany A, ny vondrona B faharoa ary ny sisa mandra-pahatapitry ny tolona.
Hanomboka ny fihaonana amin'ireo mpilalao ao amin'ny vondrona A efa nipetraka teo amin'ny iray amin'ny tongony aoriana izahay, raha ny ambiny kosa dia napetraka eo amin'ny haavon'ny kibo.
Ireo mpilalao tsy manara-penitra dia hosintonina miaraka aminy Fibanjinana mifantoka mandritra ny fivoriana; Mba hisorohana ny tsy fifankahazoan-kevitry ny hozatra amin'izao fotoana izao dia hitovy hatrany ny toerana misy ny mpiorina, mihazakazaha ary mankanesa lavitra araka izay azo atao avy amin'ny tongotr'i Ursoc. Araka ny efa nolazainay, ny vondrona mpilalao voatendry dia hapetraka amin'ny tongotr'i Ursoc amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fiampangana sy ny fahazoana ny Fiantraikany tafahoatra.
Isaky ny fiampangana ny Ursoc dia mora ny mampiasa cd manasitrana, satria fotoana iray manimba ny fanafihana iray manontolo izany, mba hanomezana fihodinana cd eo anelanelan'ny mpitsabo antsika.
Aorian'ny fiampangana tsirairay dia hampiasa ny fahaizany i Ursoc Cacophony mierona. Amin'io fotoana io ny tarika iray manontolo dia tokony hifanakaiky akaiky, ao anatin'ny radius 25 m. Ary koa amin'ny cacofony tsirairay, Ursoc dia hamela faritra 20 metatra Miasma Tsy maintsy miala any amin'ny faritra haingana araka izay tratra isika ary mandroso ny fivezivezena mihitsy aza mba tsy hahazo tic.
Averina ity mandra-pahatapitry ny lalao:
Fibanjinana mifantoka > Fiantraikany tafahoatra >Cacophony mierona >Miasma >Cacophony mierona >Miasma ary manomboka indray.
Raha ny fiara mifono vy, ankoatry ny fahafantarana ny hetsika toa ny sisa amin'ny fanafihana hivoaka ny Miasma, izy ireo dia tsy maintsy mamerina manangana ny seho ary mampandroso azy eo amin'ny sisin'ny efitrano. Mandritra izany fotoana izany dia hiatrika ny fahaiza-manao roa izay omen'i Ursoc ho azy ireo izy ireo, manafotra y Telovolana
Ursoc dia hampiasa manafotra y tao an-tanàna raha tsy izany, ka tsy maintsy hatakalo ny fiara mifono vy. Amin'ny tanky ianao dia tsy afaka manangona marika tsirairay avy na oviana na oviana, satria manafotra mampitombo ny fahasimbana nalaina avy tao an-tanàna 150% ho an'ny 12 seg. Ka "tank A" no mandray manafotra, "tank B" no miantso azy hanao rebibir tao an-tanàna, avy hatrany dia miantso ny Ursoc indray ny "tank A" ary mahazo ny marika faharoa an'ny manafotra. Amin'ity seho manaraka ity, ny tanky B dia hanomboka ary hanangona marika fanitsakitsahana roa.
Hihasarotra kokoa ny ady amin'ny Ursoc, raha ny fahasimbana azon'ny tarika, noho ny Fifandirana mafy, fahaizana hampitombo ny fahasimban'ny Cacophony isaky ny fierona. Rehefa mahatratra 20% Ursoc dia hampiasa Raikitra ny ràAmin'izao fotoana izao dia hatsipintsika ny Mahery fo ary izay sisa tavela amin'ny fiainan'ny lehibeny dia lasa hazakazaka dps.
Hatreto dia ny famintinana ny fivoriana, mba hananana vina mazava kokoa, dia aza mijanona mijery ny bokin-dahatsary.
Soso-kevitra amin'ny asany
Rehefa tsy eo ambanin'ny fitaoman'i Inertia, manelingelina ny Fibanjinana mifantoka an'ny Ursoc hampihenana ny habetsaky ny fahasimbana atrehiny Fiantraikany tafahoatra.
Mankanesa lavitra an'i Ursoc araka izay azonao atao rehefa lasibatra ianao Fibanjinana mifantoka hampihenana ny fahavoazana azonao Famonoana tototra.
Hamarino tsara fa tsy misy tanky voakasik'izany manafotra y tao an-tanàna indray mandeha. Maneso ny fahavalo rehefa ilaina izany.
Alefaso eo anelanelan'ny fiara mifono vy mahasarika an'i Ursoc mandritra manafotra y tao an-tanàna isaky ny mavesatra.
Halaviro ireo sary nofy ratsy mba hialana amin'ny fijaliana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Bands » Torolàlana momba ny Ursoc - Emerald Nightmare Raid - Heroic
Torolàlana hiantsoana an'i Nocturno, lehiben'ny fiverenana any Karazhan
Personal Loot Helper - Araraoty ny fandrobana anao manokana